Numeri 10 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
10 Zvino Jehovha akataura naMosesi, achiti:
2 “Zvigadzirire mabhosvo+ maviri esirivha. Uagadzire nenyundo, uashandise pakuunganidza+ ungano nepakuputsa misasa.
3 Kana vakaaridza ose, ungano yose inofanira kusangana newe pasuo retende rokusanganira sezvakarongwa.+
4 Kana vakaridza rimwe chete, machinda anenge ari vakuru vezviuru zvevanakomana vaIsraeri anofanira kusanganawo newe sezvakarongwa.+
5 “Kana mukaridza kwazvo muchikwidza nokuderedza inzwi, mapoka evaya vakadzika musasa kumabvazuva+ anofanira kutama.
6 Kana mukaridza kwazvo kechipiri muchikwidza nokuderedza inzwi, mapoka evaya vakadzika musasa kumaodzanyemba+ anofanira kutama. Vanofanira kuridza kwazvo vachikwidza nokuderedza inzwi panguva imwe neimwe inotama rimwe rawo.
7 “Zvino pakuunganidza ungano, ridzai,+ asi musaridza kwazvo muchikwidza nokuderedza inzwi.
8 Vanakomana vaAroni, vapristi, vanofanira kuridza mabhosvo,+ uye kushandiswa kwawo ngakuve murau wenyu nokusingagumi muzvizvarwa zvenyu zvose.
9 “Kana mukaenda kuhondo munyika yenyu muchirwisana nomudzvinyiriri anenge achikunetsai,+ munofanira kushevedzera nokuda kwokurwa muchishandisa mabhosvo,+ uye muchayeukwa pamberi paJehovha Mwari wenyu, moponeswa pavavengi venyu.+
10 “Pazuva ramunofara+ nepamwaka yemitambo yenyu+ nepanotanga mwedzi yenyu,+ munofanira kuridza mabhosvo pamusoro pezvinopiwa zvenyu zvinopiswa+ nezvibayiro zvenyu zvokugoverana;+ uye kushandiswa kwawo ngakuve chiyeuchidzo chenyu pamberi paMwari wenyu. Ndini Jehovha Mwari wenyu.”+
11 Zvino negore rechipiri, mumwedzi wechipiri, pazuva rechimakumi maviri mumwedzi wacho,+ gore rakasimuka kubva pamusoro petebhenekeri+ yeChipupuriro.
12 Vanakomana vaIsraeri vakatanga kutama murenje reSinai maererano nemabviro avaiita,+ uye gore racho rakanomira murenje reParani.+
13 Vakatanga kutama kekutanga, maererano nezvakarayirwa naJehovha achishandisa Mosesi.+
14 Naizvozvo boka remadzinza matatu romusasa wevanakomana vaJudha rakatanga kutama maererano nemauto aro,+ uye Nashoni+ mwanakomana waAminadhabhi ndiye aitarisira uto raro.
15 Uto redzinza revanakomana vaIsakari raitarisirwa naNetaneri+ mwanakomana waZuari.
16 Uto redzinza revanakomana vaZebhuruni raitarisirwa naEriyabhi mwanakomana waHeroni.+
17 Zvino tebhenekeri yakaputswa,+ uye vanakomana vaGeshoni+ nevanakomana vaMerari+ sevatakuri vetebhenekeri vakatama.
18 Boka remadzinza matatu romusasa waRubheni+ rakatama maererano nemauto aro, uye Erizuri+ mwanakomana waShedheuri ndiye aitarisira uto raro.
19 Uto redzinza revanakomana vaSimiyoni+ raitarisirwa naSherumieri+ mwanakomana waZurishadhai.
20 Uto redzinza revanakomana vaGadhi raitarisirwa naEriyasafi+ mwanakomana waDheueri.
21 VaKohati sevatakuri vezvinhu zvakatsveneswa zvomunzvimbo tsvene+ vakatama, zvavaifanira kunge vamisa tebhenekeri panguva yavaizosvika.
22 Boka remadzinza matatu romusasa wevanakomana vaEfremu+ rakatama maererano nemauto aro, uye Erishama+ mwanakomana waAmihudhi ndiye aitarisira uto raro.
23 Uto redzinza revanakomana vaManase+ raitarisirwa naGamarieri+ mwanakomana waPedhazuri.
24 Uto redzinza revanakomana vaBenjamini+ raitarisirwa naAbhidhani+ mwanakomana waGidhiyonai.
25 Zvino boka remadzinza matatu romusasa wevanakomana vaDhani+ rakatama rikava varindi veshure+ kwemisasa yose maererano nemauto avo, uye Ahiezeri+ mwanakomana waAmishadhai ndiye aitarisira uto raro.
26 Uto redzinza revanakomana vaAsheri+ raitarisirwa naPagieri+ mwanakomana waOkrani.
27 Uto redzinza revanakomana vaNaftari+ raitarisirwa naAhira+ mwanakomana waEnani.
28 Aya ndiwo mabviro aiita vanakomana vaIsraeri pavaitama maererano nemauto avo.+
29 Zvino Mosesi akati kuna Hobhabhu mwanakomana waReueri+ muMidhiyani, tezvara vaMosesi: “Tava kutama kuti tiende kunzvimbo yakanzi naJehovha, ‘Ndichakupai iyo.’+ Handei tose, uye tichakuitirai zvakanaka,+ nokuti Jehovha akataura zvakanaka pamusoro paIsraeri.”+
30 Asi akati kwaari: “Handizoendi pamwe chete nemi, asi ndichaenda kunyika yangu+ nokuhama dzangu.”
31 Iye akati: “Ndapota, musatisiya, nokuti imi munonyatsoziva patingadzika musasa murenje, munofanira kuva maziso edu.
32 Uye kana mukaenda nesu,+ chokwadi, kana Jehovha akatiitira zvakanaka, isu tichakuitiraiwo zvakanaka.”
33 Naizvozvo vakabva pagomo raJehovha+ vakafamba rwendo rwemazuva matatu, uye areka yesungano yaJehovha+ yaivatungamirira kworwendo rwemazuva matatu kuti ivatsvakire nzvimbo yokuzorora.+
34 Gore+ raJehovha rakanga riri pamusoro pavo masikati pavakafamba vachibva mumusasa wacho.
35 Zvino paisimuka Areka, Mosesi aiti: “Haiwa Jehovha, simukai, vavengi venyu ngavapararire;+ uye vaya vanokuvengai kwazvo ngavatize pamberi penyu.”+
36 Payaizorora, aiti: “Haiwa Jehovha, dzokai, kumakumi ezviuru aIsraeri.”+